१४ फेब्रुअरीमा विवाह गर्दै चर्चित गायिका नेहा कक्कर र आदित्य ! -
१४ फेब्रुअरीमा विवाह गर्दै चर्चित गायिका नेहा कक्कर र आदित्य !
एजेन्सी, बलिउडकी चर्चित गायिका नेहा कक्कर हाल ‘इन्डियन आइडल’ सिजन ३ मा जज छिन्। नेहा यस शोमा कहिले रुदै त कहिले कन्टेस्टेन्टलाई सहयोग गर्दै देखिन्छिन्। नेहाको साथै यस शोमा विशाल ददलानी र हिमेश रेशमिया पनि जज रहेका छन्।
पछिल्लो समय यस सेटमा नेहाको विवाह यस शोका होस्ट तथा सिंगार आदित्य नारायणसंग तय भएको छ। वास्तवमा नेहा र आदित्यका परिवार ‘इन्डियन आइडल’ मा पाहुनाको रुपमा पुगेका थिए। जहाँ दुवैको परिवार मिले र सगुन उनीहरुलाई सगुन दिदै नेहा र आदित्यको विवाह पक्का गरे। आदित्यका पिता उदित नारायण झा अलका याग्निकको सतह पुगेका थिए।
उदित नारायण झाले नेहालाई बुहारी बनाउन चाहेकै कारण यस शो हेरेको बताउछन्। त्यसपछि नेहाको अभिभावक र आदित्यकी आमा दिपा पनि आउछिन् । नेहा र आदित्यको परिवार मिलेर विवाहको तारिख पनि तय गर्छन। यो सुनेर आदित्य खुसि हुन्छन्।
नेहा र आदित्यको विवाह मिति १४ फेब्रुअरीमा बताइएको छ । तर आदित्य र नेहा रियलमै विवाह गर्न लागेका हुन् या मजाक मात्रै हो यो भने पछि नै थाहा हुनेछ। आदित्यलाई प्राय नेहालाई जिस्किदै गरेको शोमा देख्न सकिन्छ ।